Chongqing ၀ န်ထမ်းများ ရဲ ကို မောင်းထုတ် သည့် အဖြစ်အပျက် ကို Starbucks တုန့်ပြန် သည် - Pandaily
Chongqing ၀ န်ထမ်းများ ရဲ ကို မောင်းထုတ် သည့် အဖြစ်အပျက် ကို Starbucks တုန့်ပြန် သည်
Feb 15, 2022, 12:51ညနေ 2022/02/15 14:34:33 Pandaily
တနလၤာေန႔က တ႐ုတ္ အင္တာနက္ သံုးစဲြ သူ တစ္ေယာက္က လူမႈကြန္ယက္အနောက် တောင်ပိုင်း Chongqing ရှိ Starbucks ၀ န်ထမ်းများစတိုးဆိုင် တွ င်စား ခြင်းသည် ကော်ဖီ အမှတ်တံဆိပ် ၏ပုံရိပ် ကိုထိခိုက် လိမ့်မည်ဟု အကြောင်းပြ ချက်ဖြင့် ရဲ အဖွဲ့ တစ် ဖွဲ ့ကို မောင်းထုတ် ပါ။
ထို့နောက် Starbucks သည် လူသိရှင်ကြား တောင်းပန် ခဲ့သည်။ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ ဆိုင္ သို႔ ရဲအရာရွိ ေလးဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆိုင္ ၀န္ထမ္း မ်ားက ျပင္ပ ဧည့္သည္ ဧည့္သည္ ဧရိယာ တြင္ ထမင္းစား ရန္ စီစဥ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ံုးမွ သိရသည္။ နောက်ပိုင်းတွင် အခြား ဖောက်သည် များသည် ပြင်ပ ထိုင်ခုံ များ လိုအပ် သောကြောင့် စတိုးဆိုင် ၀ န်ထမ်းများနှင့် ရဲ များ သည်မ လျော်ကန် သော အသုံးအနှုန်း များ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော နားလည်မှု လွဲမှား ခြင်း တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းကို ေနာက္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ လူမႈကြန္ရက္ ပလက္ ေဖာင္း ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မုန်တိုင်း မဖြစ်ပွား မီ နှစ်လ အလို တွင်၊Starbucks သည် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု အကျပ်အတည်း ထဲ ရောက် နေပြီကျေးလက် ဒေသမှာ ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Wuxi အရှေ့ပိုင်း ရှိ Starbucks စတိုး သည် သက်တမ်း ကုန် သော ပါဝင် ပစ္စည်း များမှ ပြုလုပ်သော အစားအစာ များကို ရောင်းချ နေသည် ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Starbucks သည် ဘေဂျင်း ရှိ China World Trade Center တွင် တရုတ်ပြည်မကြီး ၌ ၎င်း ၏ပထမဆုံး စတိုးဆိုင် ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ တွင်တရုတ် စျေးကွက် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြီးလျှင် Starbucks ၏ဒုတိယ အကြီးဆုံး စားသုံးသူ စျေးကွက် ဖြစ်သည်။ Starbucks ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် Starbucks China ၏ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ဝင်ငွေ မှာဒေါ်လာ ၃. ၆၅ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၂. ၁၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Starbucks သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် စတိုးဆိုင် အသစ် ၅ ၃၈ ခု ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စတိုးဆိုင် အရေအတွက်သည် စံချိန်တင် ၃၃, ၈ ၃၃ ခု သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းကို Starbucks မှ တိုက်ရိုက် လည်ပတ် ပြီး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် လိုင်စင် ရ စတိုးဆိုင် များဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၏ စတုတ္ထ သုံးလပတ် အဆုံးတွင် Starbucks သည်အမေရိကန် နှင့်တရုတ် နိုင်ငံရှိ စတိုးဆိုင် များသည် ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ စတိုးဆိုင် အားလုံး၏ ၆၂% ရှိပြီး ၁၅, ၄၅၀ နှင့် ၅၃ ၆၀ အသီးသီးရှိသည်။
Tesla ၏ အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္တြင္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း Tesla ၏ ပထမဆံုး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ သည်အစား ကုမဏီက စီစဉ်တဲ့ ပုံမှန်မော်တော်ကား ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကို ပိုမိုဆောက်လုပ်ပြီး ရိုးရာဆိုင်တွေ ဖြစ်တဲ့ 4S ဆိုင်တွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cross-border Aug 03 ဩဂုတ် 4, 2021